Fampiharana ny vokatra 2-habeny ambany miaraka amin'ny toerany raikitra
by Delta Engineering / Talata 20 Janoary 2015 / Published in 2-singa rafitra
Fampiharana ny vokatra 2-haino aman-jery maranitra mitongilana misy isa
Ny DAT050 dia fametrahana 2-singa tsotra sy toekarena azo atao amin'ny famolahana ny vokatra ambany sy haingam-pandeha.
Ity fametrahana ity dia natao ho an'ny rindranasa fototra izay tsy ilaina ny haingam-pandeha amin'ny sehatry ny vokatra. Ny salanisa dia raikitra satria tsy voafehifehy ireo voatavo.
Ny milina dia miaraka amin'ny efijery fanitsiana ho an'ny fandidiana mora, ny fanaraha-maso ary ny fanitsiana.
Ny fametrahana DAT050 fandefasana DATXNUMX dia azo ampiasaina amin'ny fomba maimaim-poana miaraka amin'ny làlan'ny robot na latabatra XYZ.